Vavaka ho an'ny fandidiana. ? Alohan'ny fidirana an-tsehatra.
Ny vavaka ho an'ny fandidiana raha mila mametraka eo am-pelatanan'ny Avo Indrindra ianao ny ahiahy rehetra toa hitaona eo amin'ny saina.
Amin'izao vanim-potoana izao, ny fananana finoana miraikitra dia mety ho zava-dehibe, ary ny finoana ny vavaka no manome antsika fiadanana sy fiadanana.
Rehefa miasa ny asa tsy misy tsara noho ny fametrahana ny zava-drehetra eo an-tanan'ilay Andriamanitra nahary ny zava-drehetra.
Ny tenin'Andrimanitra dia milaza amintsika fa izy no mpanasitrana antsika ary tsy misy na inona na inona hangatahin'ny Ray homena antsika. Avelanay aminao ny vavaka tokony hataonao alohan'ny hidiranao amin'ny fandidiana.
1 Ny vavaka amin'ny fandidiana Inona no atao amin'izany?
1.1 Alohan'ny opération
1.2 Vavaka fangatahana havana
1.3 Amin'izay dia milamina tsara ny zava-drehetra
2 Mandeha any ve ny sazy?
Ny vavaka amin'ny fandidiana Inona no atao amin'izany?
Talohan'ny, aorian'ny sy aorian'ny fandidiana dia misy fotoam-pahoriana sy fanaintainana.Mampionona ny eritreritra ratsy rehetra rehefa mampitombo antsika ny finoana.
Tsy maintsy matokia izay tenin'ny Tompo Nilaza izy fa mitalaho aminy isika ary hampianatra antsika zavatra lehibe sy miafina, iray amin'ireo zavatra ireo dia mety ho fanasitranana ny vatantsika, fiadanam-pahalalana amin'ny fahalalana fa misy zavatra ataontsika ao amin'ny fankasitrahantsika sy ny finoana ny fahalalana fa izy no manao ny miasa ao aminay.
Amin'izany rehetra izany dia zava-dehibe amin'ny vavaka rehetra io vavaka io amin'ny maha-olombelona antsika.
I Jesoa Kristy mihitsy no manasa antsika hangataka ny ray amin'ny anarany, noho izany amin'ny vavaka ataontsika dia amin'ny anaran'i Jesosy hatrany, manaiky azy ho zanak'Andriamanitra, mahery tokoa manasitrana antsika sy mameno ny fontsika amin'ny fiadanana.
Ny fanaovana fehezanteny alohan'ny hampandidiana azy dia afaka manampy antsika handray fanapahan-kevitra tsara toa ny dokotera, ny tobim-pahasalamana, ny daty ary ny fomba hanatanterahana ny fandidiana.
Koa izany no zava-dehibe fa tsy mivavaha alohan'ny hidirana ao amin'ny efitrano fandidiana fa rehefa manomboka ny fizotry ny hopitaly manontolo.
Andriamanitra tiako ianao, hikarakara sy miaro ahy ianao
Omeo fahendrena sy fahaiza-manao ho an'ny dokotera sy ny mpitsabo ahy
Ataovy izay hahafahan'izy ireo manompo anao amim-pitiavana sy fanamaivanana
Amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy, Tompontsika
Ny tanjon ny hivavaka alohan'ny fandidiana dia ny fitondran'Andriamanitra foana izay zavatra hitranga amin'ny zavatsoa ary mandeha tsara ny zava-drehetra, ireo no fitakiana matetika indrindra.
Amim-bavaka dia tokony ho mazava fa miatrika fotoana izay tsy mahafehy ny tena isika na tsia ary io no antony lehibe mahatonga antsika hahatsapa tsy fahatokisana.
Miresaha amin'Andriamanitra, ambarao ny ahiahinao, lazao aminy ny tsy fandriampahalemana, tahotra ary izay rehetra tsapanao, na tsara izany na ratsy.
Lazao mafy fa omeny anao ny fanaraha-maso ny fiainanao ary misaotra azy noho ny nanomezany anao ny fandresena.
Vavaka fangatahana havana
Tompoko, dokotera maro, tia ny asany
Izy ireo dia eo am-panompoana anay.
Misaotra anao aho amin'ny fanomezana ny fahendrena
fa nomenao azy izy.
Androany no aina voavonjy amin'ny tranga izay toy ny taloha
Tsy nety nahazo fanafody na fanafody izy ireo.
Tompo ô, mitohy hatrany
tompon'ny aina ary FAHAFATESANA.
Eo am-pelatananao masina fotsiny ny vokatra farany.
Tompo ô, ampahazava ny saina sy ny fo
an'ireo amin'izao fotoana izao
Izy ireo dia mikarakara ny fanasitranana ny vatako
ary tariho ny tanany amin'ny herinao masina.
Misaotra anao noho ny hatsaram-ponao lehibe.
Raha izay efa hiditra ny efitrano fandidiana dia havana, ny vavaka Tsy maintsy atao izy io ary zahana mandritra ny dingana rehetra.
Zava-dehibe ny fahafantarantsika ny fomba famitana angovo tsara ho an'ny fianakavianay alohan'ny fidirana an-tsehatra, izany dia hanampy anao hanana toetra tsara sy amin'ny finoana mavitrika.
Tsy afaka mivavaka ho an'ny mpianakavy isika izay manana toe-tsaina ratsy na misalasala izay azon'Andriamanitra atao amin'izao fotoana izao, fa tokony hitazomana ny fihetsiky ny mpino izay manome tanjaka, fampaherezana, finoana ary herimpo ho an'ny olona ao amin'ny fianakaviana alohan'ny fandidiana sy ny faran'ny zava-drehetra. Mila misaotra an'Andriamanitra foana ianao.
Amin'izay dia milamina tsara ny zava-drehetra
Ry Ray any An-danitra, miangavy anao aho mba hitandrina sy hiaro ahy
Ampio aho hatoky anao
Ary mba hanana herimpo ampy hiatrika ity fandidiana ity
Henoy ny tahotra ahy sy ny ahiahiko
Ary ataovy azo antoka ny fanatrehanao
Manomeza sy mitahy ny mpandidy mba hahafantarany tsara izay tokony hataony
Tso-drano ny fitsaboana rehetra sy ny fikarakarana homena ahy
Ary ampaherezo aho amin'ny herinao
Koa mahatsiaro milamina kokoa ary sitrana tsara
Amin'ny anaran'i Jesosy
Mangataka amin'Andriamanitra mba handefa ny anjeliny hikarakara antsika ao amin'ny efitrano fandidiana ary, toy izany koa, mangataka azy hamatotra ny fanahy ratsy rehetra izay te hanelingelina dia fangatahana roa mendrika azontsika atao amin'ny fotoana rehetra.
Zava-dehibe ihany koa ny ahafahantsika manambara aminao ny zava-tsoa rehetra izay tiantsika ho jerena mba hahafahana mamoaka ireo angovo tsara ireo ary tanteraka ny teny eo amin'ny fiainantsika na amin'ireo olona ao amin'ny fianakavianao, namanao na olom-pantatra izay efa hiditra ato amin'ireto dingana ireto.
Mandeha any ve ny sazy?
Ny vavaka fotsiny dia hahatonga azy io ho azo antoka kokoa ary tsy dia milamina.
Tsy misy zavatra tsara kokoa afa-tsy ny matoky an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra.
Raha mino ny fonao ianao dia hanampy anao Andriamanitra amin'ity fotoana mahatsiravina ity. Ny vavaka dia mijoro ho vavolombelona ny amin'ny fahombiazana amin'ny zavatra rehetra el tontolo.
Mivavaha am-pinoana betsaka ao anatinao hany mba handeha tsara ny zava-drehetra.
Natao ho tianao indrindra ve ny vavaka natao?
Raha manana soso-kevitra momba ny vavaka ianao, dia aza misalasala miresaka momba an'io lahatsoratra io.
Amin'io fomba io dia ampio ny olon-kafa izay handia an'io olana io izay efa nitranga.
Vavaka bebe kokoa amin'Andriamanitra: